Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina: tsy hilatsaka ho filoham-pirenena aho fa ho kandidà ben’ny Tanàna » | NewsMada
Par Taratra sur 15/01/2022
Nivahiny tamin’ny fandaharana amin’ny fahitalavitra iray ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Andriantsitohaina Naina, omaly. Nitondrany fanazavana ireo fanakiana sy ny ezaka vita ary ny mbola hatao. Voaresaka koa ny lafiny politika.
Nambarany tamin’izany fa mbola ho kandidà ben’ny Tanàna ny tenany. “Tsy ho kandidà filoham-pirenena aho. Ny hahasoa an’Antananarivo no katsa­hina. Mametraka ny fandaminana aloha izao”, hoy izy raha nivahiny tamin’ny fandaharana tao amin’ny fahitalavitra TV Plus. Anisan’izany ny fampitomboana ny fotodrafitrasa hitsaran’ny mponina azy afaka roa taona. Naneho ny alahelony ny ben’ny Tanàna manoloana ny tsy fahitan’ny sasany ny fanovana natao tao anatin’ny roa taona. Mbola mitohy ny asa ary betsaka ny ezaka hatao, araka ny nambarany. Henony ireo mpizaha­tany tonga eto sy ny vahiny amin’ny fahitana fa tena niova ny Renivohitra ary reharehan’ ny avy any amin’ny faritra. “Ny lafiny ratsy hatrany no hitantsika eto Antananarivo… Afaka mitondra fanovana isika. Tsy manimba ny fana­nana iombonana, manaraka ny fepetra takin’ny tanàn-dehibe. Ilaina koa ny firainsakina fa tsy ny fitiavan-tena. Mino aho fa vitantsika ny mamerina ny hasin’ny Tanànan’Antanana­rivo”, hoy izy.
Nampanantena ny tenany fa hamboarina ny lalana na tsy mora aza ny manao izany. Notsiahiviny fa misy vola avy amin’ny fanjakana amin’ny alalan’ny Fer ny fanamboa­rana lalana. Nisy fitantanana tsy nazava anefa ka mbola mi­katso. Na izany aza, efa miezaka amin’ireo fanapenana ireo lavaka ny CUA. Efa nahazo fitaovana koa saingy maty ary efa hiverina hiasa izao noho ny fahavitan’izany. “Miara-miasa amin’ny minisitera izahay ka hiditra amin’ ny fanamboaran-dalana isika. Manenjika ny lavadavaka. Tsy zakan’ny tetibola ny lalana lehibe… Tsy afaka hanao fahagagana fa mampiasa ny eo am-pelatanana”, hoy izy.
Misy fepetra sosialy ny hetra…
Momba ny hetran-trano sy ny tany kosa, nambaran’ny ben’ny Tanàna fa nitombo be isan’ny trano. Anisan’izany ny eny amin’ny boriborintany fahadimy. Miisa 31 000 niakatra ho 39000 izany. Nisy
8 000 izany tsy tao anaty fa­ni­sana teo aloha. Tokony hatao ara-drariny ny hetra. “Efa nanokatra birao fitarainana izahay momba ny hetra. Hi­ve­renana ny fanisana trano amin’ ny alalan’ny vaomiera iarahan’ny amin’ny HCDDED. Mijaly ny mponina ka misy ampahany amin’ny tompon-trano tsy tokony handoa hetra… Misy fepetra sosialy ijerena ireo sahirana”, hoy ihany izy. Nohazavainy koa ny momba ny fanagiazana fiara “Tacket d’arret” fa famerenena filaminana sy ny fanajana ny lalàna izany.
Fandaminana fa tsy fanasaziana
Natao ho fandaminana fa tsy fanasaziana ny “tacket d’arret. Hampiditra mpana­­ra-maso ny fifamovoizana hanoro ny olona ny toeram-piantsonana ny CUA. “Hape­traka ny fahefan’ny kaomi­nina ary adidy iraisana ny fandami­nana mba hampan­deha ny fifamoivoizana. Samy maka andraikitra isika handami­nana ny tanana. Ahena ny “Tacket d’arret” fa efa tsapan’ ny olona ny fandaminana”, hoy ihany izy.
Natsidiny fa ho avy ny drafitra fandaminana ny fifamoivoizana tahaka ny natao teny Antanimena. Anisan’ izany ny eny amin’ny tonelina Ambohidahy. Hampiana koa ny “Parking”. Manampy ireo ny fitaterana Teleferika (TPC) sy ny lamasinina “Train urbain”. Efa nifampiresahan’ny ben’ ny Tanàna tamin’ny filoha Rajoelina efa ela ireo. Tsy maintsy mifandray amin’ny tetikasa maro ny fitaterana. Mifameno ny TPC sy “Train urbain”. Mbola hisy koa lalana vaovao hatao. “Tara be isika ary vao manenjika. Tsy hanenenana ny TPC ary tohanako io tetikasa io”, hoy ihany izy.
Momba ny zaridaina eny Ambojatovo kosa, hisy fandraisana anjara ny ho fidirana ao. Tsy nisy vola nivoaka fa fiarahana amin’ny tsy mian­kina ny zaridaina eny amin’ny Cnaps Ampefiloha. Ny etsy Anosy sy Ankorondrano. “Misy kosa anefa ny laharam-pahamahena. Eo ny fako sy ny sosialy…”, hoy izy.
Nifona sy niala tsiny ny ben’ny Tanàna
Naneho fifonana sy fialan-tsiny manoloana ny olan’ny fako ny ben’ny Tanàna na efa tantanin’ny CUA tanteraka aza izany amin’ny alalan’ny SMA. “Efa mahaleo tena amin’ny solika sy karama. Tsy angatahana fanampiana any amin’ny fanjakana intsony. Olana ny fitaovana efa antitra sy mora simba”, hoy izy. Na izany aza, efa misy ny tetikasa iarahana amin’ny Japoney momba ny fampitaovana. Ho avy koa anefa ny tetikasa filamatra amin’ny fanodinana fako ho “Gaz metane”, 300 t isan’andro.
Namaranan’ny ben’ny Ta­nàna fa hatao laharam-pahamehana ny sehatra rehetra. Eo ny fahasalamana manaiky va­hoaka, ny fanadiovana lakandrano ka nampihena ny fiakaran’ny rano amin’ny faritra maro, anaty fotoana fohy. Ani­san’izany ny eny Besarety, Manarintsoa Isotry. Ny tetikasa lalankely, ny tohatra, ny tetezana. Ny fametrahana jiro eny Anamalahitsy, Anosi­ma­havelona, Antohomadinika ary hitohy amin’ny faritra hafa. “Ilain’ny mponina izany ary tsy afak miandry”, hoy izy.